Sida dhakhso leh oo waxtar leh loo lumiyo baruurta caloosha | Ragga Caqliga leh
Sida si dhakhso ah oo waxtar leh loo lumiyo dufanka caloosha
Alicia tomero | | Daryeelka shaqsiyeed, Ku habboon, Fitness
Haddii aad go'aansatay inaad qaab yeelato oo aad jeclaan lahayd inaad hagaajiso muuqaalkaaga, waxaan soo jeedinaynaa tabaha ugu fiican iyo siyaabaha loo awoodo inaad lumiso baruurta caloosha. Waa in la garwaaqsadaa inay tahay meel aad isku khilaafsan iyo dad badan Way ku adag tahay inay qaybtani miisaanka ka yaraadaan. Ma jiraan wax aan suurtogal ahayn, inkasta oo ay tahay inaad ahaato mid macquul ah, gebi ahaanba ka saar dufanka meesha ku yaal gebi ahaanba waa hawl ku bixi doonta dadaal badan, laakiin waa inaad isku daydaa.
Qaybta caloosha ayaa ka mid ah meelaha ugu adag in la tirtiro, mid ka mid ah kuwa loogu neceb yahay, oo ay rag badani ogaadaan. Dumarka ayaa sidoo kale ka baaraandegaya dhinacaas, ha ahaato duruufo hormoon ah ama sababtoo ah waxay soo mareen uur. Laakiin waxaa jira talooyin wax ku ool ah iyo tabaha ku caawin kara.
1 Sida miisaanka loo dhimo si waxtar leh
2 Xeelado lagu lumiyo baruurta caloosha
2.1 Cun cuntooyin badan oo fiber iyo borotiin ah
2.2 Inaadan khamri cabbin
2.3 Liin biyo ku cab
2.4 Jimicsi jimicsi
Sida miisaanka loo dhimo si waxtar leh
Si aad u bilowdo rabitaanka inaad lumiso baruurta caloosha waa inaad bilowdaa luminta kuwa dheeraadka ah. Waxaan ku bilaabi doonaa ogaanshaha qaab nololeedkeena iyo xisaabinta dheef -shiid kiimikaadkeena asalka ah. Halkaan waxaan ka abuuri doonnaa cunto kalori noo gaar ah si aan u yareyno kalooriyada aan cunno. Tallaabada labaad waxay noqon doontaa in la caawiyo samaynta kharash kalori oo sarreeya oo ku salaysan jimicsiyada wadnaha iyo tabobar xoog si loo helo cufnaanta muruqa.
Si loo xisaabiyo dheef -shiid kiimikaadka asaasiga ah ayaan ku xisaabin doonaa qaacidooyinkan xisaabeed waxaa abuuray Harris Benedict, Natiijada isla'egtan ayaa ah kalooriyada jidhkaagu u baahan yahay maalin kasta:
Hombre = (10 x miisaanka kg) + (6.25 × dherer ahaan cm) - (5 × da'da sanadaha) + 5
Haweeney = (10 x miisaanka kg) + (6.25 × dherer ahaan cm) - (5 × sano sanado) - 161
Xeelado lagu lumiyo baruurta caloosha
Marka hore, ku bilow adoo yareynaya kaloriinteena qaadashada xad dhaafka ah iyo abuuro yaraanta kalooriga. Haddii aan jecelnahay inaan wax badan cunno inta u dhexeysa cuntooyinka, waa inaan baabi'innaa dhammaan macmacaankaas, cunto fudud ama cabitaannada fudud ee ku daraya kaloriyo aanan u baahnayn.
Cun cuntooyin badan oo fiber iyo borotiin ah
Waannu isla garannay taas cuntooyinka hodanka ku ah karbohaydraytyada waa in la isku dayo in la yareeyo ee cuntadeena. Waxaa jira dad ku wareejinaya karbohaydraytyadaan dufan jidhkooda ku jira, sidoo kale waxay diiradda saaraan meelaha sida miskaha iyo caloosha. Sonkorta waa in sidoo kale la tirtiraa ee cuntada, maadaama kartideeda kalooriga loo rogay dufan.
Si loo yareeyo hammigaas oo dhan waxaad ku beddeli kartaa dhammaan cuntooyinkaan coo leh xaddi badan oo borotiin ah. Barootiinnadu waxay gacan ka geystaan ​​xakamaynta rabitaanka cuntada oo in yar ayay na qancin doonaan. Cuntooyinka hodanka ku ah fiber waxay kaloo caawiyaan yareynta gaajada waana laga heli karaa cuntooyinka oo dhan, miraha, khudaarta iyo digirta. Kordhinta 10 garaam oo fiber ah Cunnadeena maalinlaha ah waxaan ku yareyn karnaa ilaa 3,5 boqolkiiba dufanka jirka. Qaadashada lagu taliyey ee kormeerkan ayaa noqon doonta 20 ilaa 35 garaam maalintii.
Inaadan khamri cabbin
Waan ognahay in ka fogaanshaheeda isticmaalka ay adag tahay, laakiin waa inaan u qaadannaa khamriga wuxuu jidhka ku daraa kalooriyo badan oo aan loo baahnayn iyo gaar ahaan haddii lagu qaado cabitaanno hodan ku ah. Waa in iska ilaali dhammaan kalooriyada madhan oo sidaas ayaan beerkayaga ku caawin doonaa. Waxa caadiga ah waxay noqon doontaa in hal cabitaan oo khamri ah maalintii la siiyo dumarka iyo laba cabitaan oo ragga ah.
Liin biyo ku cab
Tani ayaa kaa caawin doona si uun si loo yareeyo kaydka dufanka. Waxaa lagu muujiyay daraasadaha qaarkood in cabitaanka biyaha liin dhanaanta ay gacan ka geystaan ​​hagaajinta dheef -shiid kiimikaadka iyo yaraynta rabitaanka cuntada. Waxaa fiican inaad qaadato subaxdii calool madhan. Waxaad fiirin doontaa sida ay gacan uga geysaneyso in dheefshiidka dhammaan cuntooyinka aan cunno aad uga sii fiicnaado oo beerka sumoobo si uu si aad u fiican u shaqeeyo.
Isboortigu waa beddel kale oo lagu dhimi karo dhexda. Isku darka ugu fiican waa samee xoogaa cardio weheliso jimicsi gaar ah oo loogu talagalay abs. In kasta oo aanad diirada saarin kaadhka kaliya, maadaama aad ku qaadan karto 20 daqiiqo kor u qaadista culeyska oo aad ka caawiso yareynta dufanka caloosha.
Waxaa ka mid ah laylisyada aad ku dhaqmi karto, aad bay waxtar u leedahay saxanka isometric. Waa dhaqan la samayn karo iyadoo la adeegsanayo xoog lana yareeyo xanuunka dhabarka ama dhaawaca. Waxa muhiimka ahi waa in la adkeeyo qaybta caloosha oo la sameeyo taxane ah 30 illaa 45 sekan.
Layli fadhi-ku-fadhiyo leh lugo kor u qaadid sidoo kale waa hab kale oo aan gadaal loogu cadaadin Waxaa la samayn doonaa iyada oo jidhka dhabarka u jiifa, gacmuhu ay taageeraan oo jimicsiyo kala duwan lugaha ku sameeyaan, iyada oo aan dhulka la taaban.
Jimicsiyada kale ee aan ku talin karno waa sida loo sameeyo caloosha hooseah qasab ah ama isometric. Haddii aad xiisaynayso, waxaad sidoo kale baari kartaa sida samaynta fadhiyada si sax ah oo raac jadwalka joogtada ah si aadan u dhaafin garaac oo aad si fiican u aragto natiijooyinka. Maskaxda ku hay taas waa inaad joogto noqotaa Si aad u awooddo inaad aragto hadafkaaga, marka hore had iyo jeer way adag tahay inaad la qabsato laakiin qiyaastii 12 ilaa 14 maalmood waxaad bilaabi doontaa inaad aragto natiijooyin waxayna kugu dhiirri -gelinaysaa inaad hore u sii socoto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Sida si dhakhso ah oo waxtar leh loo lumiyo dufanka caloosha
Waa maxay midabada ugu raaxaysiga badan marka la labbisto nin